China Panel Ukunyuka PM1-2P Series DC Isolator Tshintsha mveliso kunye nabenzi | FEIMAI
Iphaneli inyuswe (ii-4 xscrews) i-64 × 64 ipleyiti yesesutcheon
• Ngokukodwa ii-inverter (Max.l200V / 32A)
I-ADELS PM1 Series DC Isolator switch iyasetyenziswa kwi-l ~ 20 KW indawo yokuhlala okanye inkqubo yentengiso ye-photovoltaic, ibekwe phakathi kweemodyuli ze-photovoltage kunye nee-inverters. Ixesha lokurola lingaphantsi kwe-8ms, eligcina inkqubo yelanga ikhuseleke ngakumbi. Ukuqinisekisa uzinzo kunye nobomi benkonzo ende, iimveliso zethu zenziwa ngamacandelo anomgangatho ofanelekileyo. Umbane omkhulu ufikelela kwi-1200V DC. Inesikhokelo esikhuselekileyo phakathi kweemveliso ezifanayo.
PMl -2P Series DC Isoator itshintsha
Chwetheza FMPV16-PM1-2P, FMPV25-PM1-2P, FMPV32-PM1-2P
2-pole4-ipali kuthotho Input kunye Isiphumo ezantsi 2-pole4-ipali kuthotho Igalelo kunye Imveliso phezulu 2-pole4-ipali kuthotho Igalelo phezulu Isiphumo ezantsi 2-pole4 pa kaloliwe ezibhalwe eted
I-PM1-2P Series DC Isolators yenzelwe ngokukodwa ukutshintsha i-Direct yangoku (DC) kwiivolthi ukuya kuthi ga kwi-1200Volts. Uyilo lwabo olomeleleyo kunye nokukwazi ukutshintsha iithagethi ezinjalo, ngoku zilinganisiwe, zithetha ukuba kufanelekile ukuba zisetyenziswe kutshintsho lweenkqubo zeFotoVoltaic (PV).
Ukunciphisa amathuba okusasazeka kwe-arc, iswitshi ye-PM1-2P Series isebenzisa itekhnoloji yokujikeleza yokujikeleza. Oku kuyilelwe ukwenza kunye nokwaphula isekethe ngokujikeleza kwendibano yokuqhawula ikhefu ephindaphindayo esula xa ihamba. Isenzo sokucima sinesibonelelo esongeziweyo sokugcina oonxibelelwano becocekile ngalo ndlela kunciphisa ukumelana kwesekethe kunye nokonyusa ubomi beswitshi.
Egqithileyo Isiseko seNtaba (Ukuhlangana komnyango) PM2 Series DC Isolator switch
Okulandelayo: DC Isolator Tshintsha PM1 Series
DC Isolator Tshintsha L2 Series